June 5, 2021 - समृद्ध नेपाल
रियाशा दाहाल पछिल्लो समयकी व्यस्त र चर्चित मोडल रियाशा दाहाल !
रियाशा दाहाल पछिल्लो समयकी व्यस्त र चर्चित मोडल हुन् । कलेज नेपाल युट्युब च्यानलबाट प्रशारण हुने आजकलको लब बाट चर्चामा आएकी रियाशा अहिले म्यूजिक भिडियोमा पनि व्यस्त छिन् । उनको अभिनयको दर्शकले सर्वाधिक प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । जति राम्रो रियाशाको अभिनय छ त्यति नै राम्री उनी छिन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा उनका लाखौँ फलोअर्सहरु
निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के-के गरिन्, त्यो सबै एक गो’प्य क्या’मेरामा कै’द गरिएको थियो । के छ भिडियोमा ? एक यु’वती बा’थरुममा प्रवेश गर्छिन् । ढोका बन्द गर्छिन् । त्यसपछि पालैसँग तल-माथिको दुवै कपडा खोलेर झुण्ड्याउँछिन् । अब उनको श’रीरमा ब्ल्याक वान पिस
संक्रमित दम्पतीको कथा : पैसा नहुँदा २१ दिने संक्रमित शिशुले मणिपालमा उपचार पाएन !
शुक्र’बार साँझ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रसूति तथा बच्चा वार्ड बाहिर केही मानिस मोबाइल हेरिरहेका थिए । उनीहरुको चर्चाको विषय थियो, काठमाडौंमा को–को म’न्त्री उपप्रधानमन्त्री भए । भित्र वार्डमा भने सन्नाटा थियो । एनसीयू वार्डको एउटा क्याबिनको ढोकाबाट भित्र चिहाइरहेका थिए, जानबहादुर बुढा । भित्र उनका दूधे बच्चा र श्रीमती रहेछन् । बच्चालाई दूध चुसा’इरहेकी
अधुरै भयो विदेश जाने सपना, घरवाट विदाईमा लगाएको रातो टिका पनि नमेटिदै नारायणको भयो दुखद् निधन !
अधुरै भयो विदेश जाने सपना, घरवाट विदाईमा लगाएको रातो टिका पनि नमेटिदै नारायणको भयो दुखद् निधनविदेश गएर पैसा कमाएर ल्याउने सपना बोकेर घरवाट हिँडेका एक युवक काठमाडौंको गोंगबुस्थित एक गेष्ट हाउसमा मृ त फेला परेका छन् । शनिबार राति पौने १० बजे गोंगबुको मित्रनगरमा रहेको गोदावरी सन्तोषी गेष्ट हाउसमा एक पुरूषको शव फेला परेको महानगरीय
निषेधाज्ञाको समयमा काठमाडौंको स्वयम्भु डाँडामा सरकारी गाडी लिएर युवतीसँग डे’टिङमा जाने नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशकलाई कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले निशेषाज्ञा आदेश जारी गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई का’रबाहीका लागि पत्र पठाएको हो ।आइतबार निषेधाज्ञाको समयमा काठमाडौंको स्वयम्भु डाँडामा सरकारी गाडी लिएर युवतीसँग डे’टिङमा लिप्त तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक
खुसीको खबर सबैलाई पक्का ५० कित्ता पर्ने आइपियो निस्कासन हुने मिति तोकियो ! ढिला नगर्नुहोस
जेठ २० काठमाडौं बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टले आइपीओ निष्कासनको काम टुङ्गो लगाउने गरी काम भगरिरहेको छ ।सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रतिकित्ता अनुमानित मूल्य ७५० रुपैयाँ राखेको छ । बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रतिकित्ता ७ सय ५० रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यमा आईपीओ बेच्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।कम्पनीले सर्वसाधारणलाई
सङ्क्रमित बिरामीसँगै रात बि’ताउदै आएकी एक शाहसिक नर्स भन्छिन्,मृत्युसँग डर छैन !
धापसी बसुन्धरा घर भइ विगत आठ वर्षदेखि न्यु’रो अस्पताल बाँसबारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ।आठ आठ घण्टा पिपिइ मा बेरिएर कोभिड सं’क्रमितसँग काम गर्नु त्यतिकम चुनौतीपूर्ण काम छैन। उनी अहिले उपेन्द्र देबकोटाको अ’स्पतालमा काम गर्दै आइरहेकी छिन्। उपेन्द्र देवकोटा जसको नाम लिनेबित्तिकै पनि धेरै जना बिरामीहरू निको भएको महसुस गर्दथे।त्यहाँको अस्पतालमा काम गर्न पाउँदा आफूलाई पनि ज्यादै
काठमाडौँ । गर्भावस्थामा नै बच्चाको दिमागी विकास शुरु हुन्छ । यस्तोमा शिशु कत्तिको बुद्धिमान् हुन्छ भन्ने कुरा आमाको खानेकुरामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ । यस्तोमा तेज दिमाग भएको बच्चाको लागि गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी कुराहरु समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ: अण्डा – अण्डामा कोलिन नामको तत्व हुन्छ, जुन दिमागको विकासको लागि जरुरी हुन्छ । यसबाट
आँखामा समस्या देखियो ? बेसार पनि बन्न सक्छ चमत्कारी औषधि !
आँखामा समस्या देखियो ? बेसार पनि बन्न सक्छ चमत्कारी औषधिएजेन्सी । किचनमा पाइने बेसार हामी सबैले विभिन्न प्रकारका तरकारीहरुमा प्रयोग गर्दै आएका छौँ। बेसारले तरकारीको स्वादको मात्र काम गर्दैन स्वास्थ्यका लागि पनि निकै लाभदायिक हुने गर्दछ। त्यती मात्र हैन बेसार आँखाका विभिन्न समस्याका लागि पनि निकै लाभदायिक मानिने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई बेसारका फाइदाका बारेमा
हिमानी कोषले निशेधाज्ञामा खाद्यान्न अभाव झेलेकाहरूलाई सहयोग गर्ने !
मानी कोषले निशेधाज्ञामा खाद्यान्न अभाव झेलेकाहरूलाई सहयोग गर्नेकाठमाडौँ- हिमानी कोषले कोरोना निशेधाज्ञामा खाद्यान्न अभाव झेलेकाहरूलाई सहयोग गर्ने भएको छ । कोषले भोकमरीमा परेका सुत्केरी, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, असहाय, वृद्धवृद्धा, अनाथ आश्रमका लागि तत्काल खाद्यान्न र आकस्मिक उपचारको सहयोग गर्ने भएको हो ।आवश्यक परेकाहरुले कोषले उपलब्ध गराएको ९७४२८८४१६७ , ९७४२८८४१६८ , ९७४२८८४१६८ नम्बरमा विहान १०